အလုပ်လျှောက်လွှာများအတွက်နမူနာပြန်လည်စတင် | USAHello | USAHello
သင်တစ်ဦးအလုပ်လျှောက်လွှာအဘို့သင့်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်ရေးသားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား? သငျသညျဥပမာပြန်လည်စတင်လိုအပ်ပါသလား? ဒီစာမျက်နှာတွင်, သငျသညျကိုလိုက်နာရန်အခြေခံပုံစံကိုရှာတှေ့နိုငျ. သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လျှောက်လွှာကိုက်ညီဖို့နှုတ်ကပတ်တော်၌ပုံစံကို download လုပ်ပါကပြောင်းလဲနိုင်သည်.
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်လုပ်သည့်အခါ, ကိုယ့်ကိုသင်လျှောက်ထားသောကဏ္ဍများကိုသုံးပါ. ဥပမာ, သငျသညျအလုပျသို့မဟုတ်အခြားဆုများမပြုစေခြင်းငှါ, နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင်သည်အတိတ်ကာလပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတပြုမိကြပြီမဟုတ်. ဒါကအဆင်ပြေဖြစ်ပါသည်! ကိုယ့်ရှိသူများအပိုင်းကိုထုတ်စွန့်ခွာ.
ဥပမာပြန်လည်စတင် - ကောင်းတစ်ဦးပုံစံကိုသုံးစွဲဖို့
လမ်းလိပ်စာ, မြို့, စာပို့သင်္ကေတ,
သငျသညျမှာအကောင်းတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာရေးထားနှင့်သင်တို့အဘို့ရှာကြသည်အလုပ်အမျိုးအစား. ကသိမ်းဆည်းထားပါ 1-2 စာကြောင်း.
ဤသည်၏အကျဉ်းချုပ်များအတွက်နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် 4-7 သင့်ရဲ့အဓိကတာဝန်များနှင့်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှု၏.
အလုပ်အကိုင်အမည်, ကုမ္ပဏီအမည် သငျသညျစတင်နေ့စွဲ - သင် left နေ့စွဲ
စာရင်း 4-7 သင့်ရဲ့အဓိကတာဝန်များနှင့်အကြီးမားဆုံးအောင်မြင်မှု၏. တစ်ဦးကြိယာနှင့်အတူကျည်ဆန် Start နှင့်သင်တစ်ဦးချင်းအဖြစ်ဘာလုပ်ခဲ့သလဲဆိုတာအကြောင်းပြောဆို, အစားသငျနှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့အုပ်စုအကြောင်းပြောနေတာထက်.
[မယ် Keep နှင့်သင်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ပေမယ့်ထက်မပိုရကြပြီမဟုတ်ပါလျှင်သင်၏အလုပ်အတွေ့အကြုံ၏အားလုံးစာရင်းပြုစု 15 နှစ်ပေါင်းသင်တစ်ဦးအချိန်ကြာမြင့်စွာအလုပ်လုပ်ကြပြီဆိုရင်။]
[သင်တဦးတည်းဒီဂရီထက်ပိုရှိပါက Repeat. သငျသညျတက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်သည်သင်၏အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်အခြားလေ့ကျင့်ရေးသို့မဟုတ်ဒီပလိုမာဒီထွက်စွန့်ခွာသို့မဟုတ်စာရင်းပြုစုနိုင်ပါတယ်. သငျသညျအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့မရကြလျှင်, သင်ပညာရေးအပိုင်းကိုထုတ်ထားခဲ့နိုင်သည်. သင်တို့မူကားGED®ဒီပလိုမာသို့မဟုတ်အခြားဒီပလိုမာရှိပါက, စာရင်းကြောင်း. ]
သငျသညျအလုပျမှာသင့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်လာဖို့တက်ရောက်ခဲ့သည်ရှိသည်ဟုမဆိုသင်ယူကြပြီအတန်းသို့မဟုတ်ဖြစ်ရပ်များစာရင်း. ဥပမာများမှာ: အများပြည်သူစကားပြောသင်တန်းများ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ညီလာခံ, နှင့်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်သင်တန်းအောင်လက်မှတ်များထုတ်ပေးရန်, ထိုကဲ့သို့သောတစ်ကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းရေးသို့မဟုတ်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုလေ့ကျင့်ရေးအဖြစ်.
သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် mobile device ကိုမှအပေါ်ကကိုယ်ရေးရာဇဝင် template ကို Download လုပ်နိုင်ပါတယ်. သင်က link ကို click လိုက်တဲ့အခါ, စာရွက်စာတမ်းကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ downloads, ဖိုင်တွဲကိုသွားပါလိမ့်မယ်. အဆိုပါ template ကိုနှုတ်ကပတ်တော်၌ဖြစ်ပါသည်. သင်လျှောက်ထားဖို့စကားများပြောင်းလဲနေတဲ့ဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်များအတွက်အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်အသုံးပြုရန်နိုင်ပါတယ်. အဆိုပါကိုယ်ရေးရာဇဝင် format နဲ့ template ကိုယခု Download.
သင်တို့သည်လည်းစံနမူနာကနေပြန်လည်စတင်တွေ့နိုင်ပါသည် ဘူတန်, ကရင်, နှင့် ဆိုမာလီ အသစ်ရောက်ရှိလာသော. သငျသညျအခြို့သောအလုပ်အကိုင်အခွင့်အဘို့ဤအပိုပြီးသင့်လျော်သောရှာတွေ့စေခြင်းငှါ. နောက်တဖန်သင်တစ်ဦးအခြေစိုက်စခန်းအဖြစ်သူတို့ကိုသုံးနိုငျ, ဒါပေမယ့်သင်နှင့်သင်တို့အဘို့လျှောက်ထားအလုပ် fit မှသတင်းအချက်အလက်များကိုပြောင်းလဲ. သင်လင့်များကို click လိုက်တဲ့အခါ, ဖိုင်ကိုသင့်ကွန်ပျူတာသို့ download လုပ်ပါလိမ့်မယ်.